i-youtube ye-android ifumana umxholo omnyama
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-YouTube ye-Android ekugqibeleni iqala ukufumana imowudi emnyama
I-YouTube ye-Android ekugqibeleni iqala ukufumana imowudi emnyama
Ibe ngaphantsi kweenyanga ezintandathu ukusukela oko uGoogle wabhengeza ukuba umxholo omnyama uzakukhutshwa kwiYouTube kuzo zombini iiplatifomu ze-Android kunye ne-iOS, kodwa loo nto yenzeke ngokuyinxenye . Ngelixa abasebenzisi be-iOS sele benokuthatha ithuba ngenqaku elitsha, abalandeli be-Android batshixiwe kupapasho lokuqala.
Ngombulelo, kwathatha uGoogle ngaphantsi kwesiqingatha sonyaka ukuzisa inqaku elithembise ukuba liza kubuya ngoMatshi kwiqonga lalo elihambayo. Kuyabonakala ukuba, umxholo omnyama uqalile ukukhutshelwa kubasebenzisi be-Android kule veki, kodwa kuba oku kusasazwa ngokwamabakala, kuya kuthatha ixesha ukufika kuzo zonke izixhobo.
Kuba olu luhlaziyo olusecaleni kweseva, awuzokuphumelela kwaye akufuneki ukhuphele nantoni na. Ngokuqinisekileyo uya kwazi ukuba umxholo omnyama uyafumaneka kwisixhobo sakho ukusukela Youtube isebenza ngokuzenzekelayo xa uvula usetyenziso.
Umxholo omnyama uza nokutshintsha okuvumela ukuba ucime. Akukho lutshintsho longezwayo malunga noyilo xa usebenzisa umxholo omtsha, ngaphandle kombala ocacileyo mnyama, ongekho mnyama ngokwenene kodwa ongwevu mnyama.
Qaphela umhla we-7 wokukhutshwa kwe-sprint
Inkqubo yeKnockOn izisa ngokuthepha kabini ukutshixa kwii-Android ezininzi. kwaye uvuse abo banemiboniso ye-OLED
Nazi iiapos zendlela onokufumana ngayo iMicrosoft & apos yenguqulelo yeSurface Duo nge- $ 300 kuphela
Imifanekiso ye-YouTube kuMfanekiso kwiSafari kwi-iOS 14 ibuyile (okwangoku)
Gcina ezi zixhobo ze-Apple zikude ne-pacemaker yakho